Accueil > Gazetin'ny nosy > INT SY NDAY: Henoy ny feom-bahoaka!
INT SY NDAY: Henoy ny feom-bahoaka!
Hiakatra indray ny maripanan’ny hetsi-bahoaka manomboka anio zoma sy rahampitso sabotsy. Anio zoma mantsy no mety hiroso amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana , izay iandrasan’ny rehetra ny hoe “hoeken’ity Andrim-panjakana natao hiaro ny Lalàmpanorenana ity ve ny fitorian’ny solombavambahoaka 73 momba ny tsy nahavitan’ny filohampirenena nanangana ny Fitsarana Avo na ny “Haute Cour de Justice” hatramin’izao, araka ny voafaritra ny andininy faha-167 ao amin’ny Lalàmpanorenana, sa holaviny?”
Miankina amin’izay didy havoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana izay izany ny ho avin’ny vahoaka Malagasy.
Ny azo antoka dia tsy hanaiky lembenana ho amin’izay ho fandavan’ny Hcc an’io fitakiana io ny vahoaka fa tsy maintsy hanohy ny tolona satria ny dingana ho amin’ny fanavotam-pirenena dia tsy ho azo irosoana raha toa ka mpitondra jadona sy mpanitsakitsaka lalàna, mpanosihosy ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra toy ny Fitondrana Rajaonarimampianina no manohy mitantana eto.
Fanosehana ny vahoaka hiroso amin’ny fitadiavana lalana ivelan’ny voafaritra ny lalàna velona ny fitsipahan’ny Hcc ny fampitsaharana amin’ny asany an’Ingahy Filohampirenena Rajaonarimampianina.
Tsy tokony hadinoina fa ireo vahoaka midina an-dalambe eny amin’ny kianjan’ny 13 May ireo sy ny any amin’ny faritra isan-tokony dia efa maika ny hanaisotra an-dRajaonarimampianina sy ny Hvm eo amin’ny fitondrana, amin’ny fomba rehetra fa tsy te hiandriandry sy handefindefitra izany. Na fanonganam-panjakana ilazana izany na fandrombaham-pahefana na fanilihana mpitondra na inona na inona dia ny fialan’ny fitondrana ankehitriny amin’ny toeram-pamoretany no tarigetran’ny vahoaka. Ny antony dia satria izao fitondrana Rajaonarimampianina izao no sakana tsy ahafahan’ny vahoaka miroso amin’ny tena fanavotam-pirenena sy ny tena fanarenana ny fiainan’ny isan-tokonam-baravarana ary izay teti-pampivoarana ny tontolo ara-toekarena eto. Noho izany, fahendrena ho an’ny mpikambana ao amin’ny Hcc ny manaiky ny feom-bahoaka, satria izay koa no manamarina fa “hita fototra ny tsy fahavitan’ny filohampirenena nanaja ny andininy faha-167 ao amin’ny Lalàmpanorenana”.
Tokony tsy hosokajian’ny Hcc ho zava-maivana ny ho akon’ny fanapahan-kevitra horaisiny satria jereo izao ireny
fahasahian’ny Hvm mampiasa mpikarama an’ady isaka ny sehatra ireny, ka iny fitorahana “cockatil Molotov” an’ireo mpitolona teny amin’ny Oniversiten’Ankatso tamin’ny alarobia iny no porofo iray fa tena mpanao herisetra sy mpamono olona izao rafi-pitantanana ny fahefam-panjakana izao.